Mpanamboatra sy mpamatsy tarehy tsy miady amin'ny 3ply China tsy mpanenona | Hemeikaineng
Kitapo fitsapana Antibody
Ampinga tarehy ara-pahasalamana
Fonon-tanana Latina fitsaboana
Sarony kiraro ara-pahasalamana
Fanarenana ara-panatanjahantena, trano & hopitaly
Vibrating sombin-javatra Roller
Saron-tava fandidiana tsy misy tenona 3ply azo alefa
Ity vokatra ity dia misy fitaovana telo: lamba tsy tenona, tadin'ny orona ary fehikibo elastika. Ny sarontava tarehy dia mizara ho sosona anatiny, afovoany sy ivelany, ny sosona anatiny kosa dia lamba tsy tenona tsotra, ny sosona afovoany dia lamba volomparasy polypropylene somary manify notapahina, ary ny sosona ivelany kosa dia lamba tsy tenona na manify manify. polypropylene lamba mitsonika-mitsoka. Ny tadin-tsofina dia vita amin'ny tarika elastika, izay vita amin'ny lamba tsy tenona misy fehikibo elastika ao anatiny; ny akoran'ny tadin'ny orona dia kofehy vy, izay voarakotra fitaovana vy tariby vita amin'ny vy tsara.
Ny tsy fitoviana amin'ny sarontava mahazatra sy sarontava fandidiana ara-pitsaboana. Ny sarontava mahazatra dia maharitra 4 na 6 ora eo ho eo. Ny fotoana hampiasana sarontava amin'ny fandidiana dia lava kokoa noho io, saingy avo kokoa ny fahombiazan'ny fiarovana. Raha misy fandidiana amin'ny ora ara-dalàna Na raha misy ny mety fiparitahan'ny aretina amin'ny fifandraisana akaiky dia asaina mampiasa sarontava fandidiana na sarontava miaro. Ny saron-tava tsy azo ampiasaina dia ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro sy ho fiarovana isan'andro.
Ity sarontava ity dia malaza be amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao, ary betsaka kokoa ny mpanjifa mifandraika aminay amin'ny fividianana betsaka. Ny vokatrao dia tsara kalitao ary ny vidiny dia mendrika ny kalitao. Raha mila santionany ianao dia afaka mifandray aminay aloha, afaka manome santionany izahay hanamarinana ny kalitao.
Fitaovana: Lamba tsy voatenona 3S * lamba voatsonika 2 + 99%
Famaritana: 17,5 * 9.5cm
Antsipirian'ny fonosana: Sombiny / kitapo 10, farantsa 1000 / baoritra na 50piasa / boaty
Haben'ny boaty: 57 * 30 * 40cm
Modely: Sterile / tsy mando
Fomba fanamafisana: Fanamafisana orilisida oksida
Taratasy fanamarinana: CE / FDA
Fenitra: EN14683: 2019 Type IIR
Daty lany daty: 2 taona
Daty famokarana: Jereo ny tombo-kase
1. Soso-kitroka hamandoana: lamba porofon-doko polypropylene manadio; Sivana fanivanana: lamba fanivanana avo lenta mandoko lamba famafazana; Ny sosona tsy tantera-drano: lamba porofon-tsoratry ny fidiovana polypropylene.
2. Loopan'ny sofina marefo: Mahafinaritra ny mitafy.
3. Ny orona azo ovaina azo esorina malalaka.
2. Ny vokatra dia nandalo CE, FDA, ISO fanamarinana.
3. Valio haingana ary manome serivisy feno sy feno fiheverana.
2. Vidin'ny varotra mivantana an'ny orinasa.
3. Fanomezana toky.
4. Manaterà haingana.
5. Manana serivisy aorinan'ny varotra tsara izahay.
6. Efa hatramin'ny ela no nanompo hopitaly be izahay.
7. Mihoatra ny 10 taona ny traikefa amin'ny varotra eo amin'ny sehatry ny fitsaboana.
8. Tsy misy MOQ amin'ny ankamaroan'ny vokatra, ary ny vokatra namboarina dia azo entina haingana.
Teo aloha: Saron-tava fitsaboana tsy voatenona 3ply azo ampiasaina
Manaraka: Saron-tarehy miady amin'ny zavona manohitra ny zavona
Saron-tava fandidiana azo alefa ho an'ny ankizy
Saron-tava fitsaboana tsy voatenona 3ply azo ampiasaina
Adiresy:No. 811, rihana faha-8, tranobe 1, No. 5 Jialing Road, Distrikan'i Wuhou, Chengdu